Radeon Vega 20 inodonhedza mu AMD inogadziridza paLinux | Linux Vakapindwa muropa
Izvo zvakaziviswa kuCES kuti kutanga kwegore rino 2018 kuti AMD inenge ichishanda pane nyowani chip yeVega iine 7nm yekugadzira nzira iyo ichaitwa mune yakadzika neural network kune ekushandisa enjere ekushandisa uye muchina kudzidza pakupera kwegore.
AMD yechikamu chayo yakazivisa kuti ichatanga kugadzira 7nm Vega mukota yechina ya2018, ine icho nekuda kwekuti padyo sei neichi, Mumaketani ekupedzisira ayo AMD inopa Linux, zvimwe zvitupa zvakawanikwa mukati meizvi izvo zvakamutsa kufarira kwevashandisi vazvo, sezvo zvakatanga kufungidzira kuti AMD iri kugadzirira kuvhurwa kwayo kweVega 20 mifananidzo.
Iyo chigamba chitsva inoita kunge inounza rutsigiro rweanopfuura makumi mashanu maficha Vega-yakatarwa ye-hardware-chikamu maseteni ayo akange asipo kare kubva kuLinux kernel kana kuti aingoitwa zvishoma.
Mazhinji ezvigadziriso inouya iri sechitanhatu maPI maID matsva akanyoreswa muchikamu cheLinux ichangopfuura.
Kunyange zvakadaro zvakangopfuura kufungidzira panguva ino, kuwanda kwechangobva kuitika kwemazita emakodhi kubva AMD yakasimudzira kutenda kuti kuchave nekuburitswa kutsva pakupera kwegore rinoUye ichi chiri nechikonzero chakanaka sezvo chizvarwa chinotevera cheiyo AMD Navi yekuvakisa iri mumabasa.
AMD haina kutaura kune yayo nyowani 7nm Vega chip seVega 20, asi nemifananidzo yakaratidzwa pano yaimbosvinwa tinogona kuona kuti vanotsanangura zvakajeka GPU "Vega 20" yakavakirwa pa7nm yakanyatsogadzirirwa AI uye yakagadzirirwa kupinda mumusika mu2018.
Zvakanaka Neruzivo rwese rwakabuda kusvika parizvino, Vega 20 yaizove yakatosiyana neVega 10 munzira dzakasiyana siyana.
Kutanga yeiyo yakapusa chokwadi iyo yakagadzirirwa kupa kakapetwa ka8 kuita kwakawanda Kaviri-kunyatso kuverenga, kune rimwe divi, zvakare kunoitika kupeta hupamhi hweyeuchidzo yekumusoro uye kutsigira kusvika kumana HBM4 masaga.
Izvi zvinoreva kuti inogona kuve yakagadzirirwa kusvika ku32GB yeHBM2 VRAM uye unokwanisa kuwana iyo 1TB / s yebandwidth. Pamwe pamwe nekukosha kwekuvandudzwa kwekaviri kunyatso kuverenga, Vega 20 ichave ine yakasimba kwazvo komputa injini.
Tsanangudzo ishoma, asi tinofanirwa kumirira kuti tizive zvichaitika, sezvo ichingogona kuramba iri mukufungidzira kuri nyore. Zvakanaka, kutanga kwezvose, kana zvirizvo, iyi mhando nyowani yechip haina kuitirwa mitambo yemavhidhiyo, kubvira Sezvambotaurwa pakutanga, ichave yakagadzirirwa kugadzirwa kwehungwaru uye zvekushandisa zvemuchina.
Imwe pfungwa yekufunga nezvayo ndeyekuti zvakare inogona kunge iri yekuwedzera kana kuti titaure imwe vhezheni kune imwe modhi iyo inoitirwa kushandiswa mumitambo yemavhidhiyo uye imwe yacho kune izvo zvakatsanangurwa kare.
Ichokwadi ndechekuti nepo zvese zviri mukungofungidzira, hapana chinogona kutaurwa pamberi.
Zvakanaka, kana sevamwe venyu muchirangarira, pakabuda chinhu chenhau panowanikwa zvimwe zvirevo muWindows 10 Kernel kwavakanongedzera kuXbox, vanhu vazhinji vakatanga kutenda kuti muWindows 10 vaizove nemukana wekushandisa mazita ekunyaradza pa iyo, apo yaingove yekuwedzera kwayo.
Kunyangwe parizvino pasingazivikanwe zvimwe nezvazvo, hazvitore nguva yakareba kuti ruzivo rwakawanda rubudirire kunetiweki watinogona kudzidza nezvazvo zvizere.
Ini pachangu ndinofunga kuti vazhinji vari kutarisira zvisina basa zvinhu nekuti kubva pachikamu changu ndinofunga chichava chikamu cheimwe vhezheni yechigadzirwa uye pamusoro pekupihwa nzira yainotungamirwa, chingave chinhu chakavanzika uye chinoziva zvakawanda nezve it.
Pasina imwezve ado, chete nekufamba kwemwedzi ndipo patinozoziva izvo AMD iri kugadzirira nezvayo ramangwana zvirongwa
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Radeon Vega 20 Yakadonhedzwa mu AMD Linux Dzidzo